Umthengisi weePlastiki zokuLungisa iiPlastiki eziThengisayo | Iigusha ezintathu
Ukongezwa kweNyoni yeNtaka yeAnti
Abalukiweyo Net Bird intaka
IiNjongo eziNinzi zeeNgcaciso zeGadi
Iplastiki iTrellis Mesh
Umjelo woGada oGcina
I-ertyisi kunye neembotyi
Umkhono wokukhusela imikhono
Izikhonkwane zePlastiki zokuLungisa
Ikhava yangaphantsi yeNethiwekhi
Izikhonkwane zeplastiki zenzelwe iishiti zephepha okanye iintente. Kulungile ukuba ube nengxowa yakho yekiti, kulula ukuyifaka emhlabeni onamatye kwaye ukhazimle ngokwaneleyo ukuze ubone ngokucacileyo.
Umbala: Mnyama, Luhlaza, Mthubi
Ubukhulu: ngokweemfuno zakho
Iphakheji: njengeemfuno zakho
Imilo etsobhileyo kukuqinisekisa ukuba izikhonkwane zinokuqhutywa ngokulula emhlabeni
Intloko ejikelezileyo yesikhonkwane ebonelela ngendawo yesibini yokunxibelelana komhlaba, ukunciphisa umngcipheko wokuba isikhonkwane sijike emhlabeni phantsi koxinzelelo kwaye siphephe intambo ebambeleyo ukutyibilika.
Ngokungafaniyo nesinyithi, izikhonkwane zeplastiki azizukurusa okanye ukuwohloka-zinokuphinda zisebenze kwaye kube lula ukuzigcina kubhaka wakho okanye kwishedi yegadi.
Ukusetyenziswa kweenjongo ezininzi okunje nge-paver edging, i-landscape edging, ukhula ukhuko, i-turf eyenziweyo
Egqithileyo Ikhava yangaphantsi yeNethiwekhi
Okulandelayo: Qokelela iMinquma
UKUFUNDA SIMAHLA +86 519 86059966
IDILESI Igumbi A2309, iZiko loRhwebo leHlabathi, i-16 Yanzheng Road, Isithili seWujin, Changzhou, kwiPhondo laseJiangsu, China 213164